Yaa kamid ah siyaasihiinta caanka ah ee Soomaalida ee Kenya Adeegsaneysa - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Yaa kamid ah siyaasihiinta caanka ah ee Soomaalida ee Kenya Adeegsaneysa
Yaa kamid ah siyaasihiinta caanka ah ee Soomaalida ee Kenya Adeegsaneysa
Waa maxay Sababta Mucaaradku u baahinayaan inaanay Madaxweynaha Dawladda Federalka Soomaaliya u aqoonsanayn Madaxweyne Sharci ah?
Dawladda Kenya iyo waxay dhaqaale xoogan ku bixiyeen, sidii Mucaaradka iyo qaar kamid ah Maamul goboleedyadu, dunida ugu sheegi lahaayeen in aanay Soomaaliya kajirin Dawlad sharci ah oo dalka metesha, dawladiina wakhtigeedi dhacay.
Waa maxay danta Kenya warkan ka leedahay?
Kenya, waxay Maxkamada Cadaalada Adduunka ka dalbatay inay dacwada badda kusoo kordhiso nuqulo cusub oo ah, in dacwada dib loo dhigo ilaa laga gaadhayo, Dawlad kale oo ka dhalata Soomaaliya iyo in la sugo Dawladda dhalata kolka doorashadu dhacdo.
Cadaymaha Kenya doonayso inay u gudbiso Maxkamada, maxay yihiin?
Cadaymahaasi, maaha kuwo kale ee waa khudbadaha shirarka Mucaaradka iyo weliba waraaqaha ay soo saarayeen maalmihii u dambeeyey Madasha Mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood, kuwaasi oo ay ku sheegayeen todobaadkii u dambeeyey inaanay aqoonsanayn Madaxweyne Farmaajo iyo inaanay dalka ka jirin Dawlad sharciyad haysata oo ummadda metesha.
Warbaahinta, Dalka Kenya waxay bilaabeen saddexdii maalmood ee u dambeeyey, baahinta wararka Mucaaradka Soomaaliya, kuwaasi oo ay ku ladhayaan ujeedkooda ah “Inaan Kenya dacwad la geli karin, dawladda Soomaaliya maadaama wakhtigeedi dhacay oo Musharaxiintii iyo Maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood sheegeen inaanay Dawladda jirtaa sharci ahayn.”
Kiiska dacwada badda Soomaaliyeed, ayaa la filayaa inuu ka furmo Maxkamadda Cadaalada adduunka, bisha Maarso ee innagu soo aaddan.
Fadhiga Maxkamadu, waa kii go’aan gaadhista iyo kama dambaystii, taasina waa sababta Mucaaradka iyo labada maamul, Kenya u isticmaalayso iyaguna Kenya dartee.